AMBOROVY MAHAJANGA : Tsy neken-drangahy hampidirina tao an-trano ny nofo mangatsiakam-badiny
Anisany toetra tsy zakan’ny sain’ny Malagasy indrindra amin’ny maha olombelona ny fiadivana amin’ny faty. 2 novembre 2017
Nampisavorovoro ny mpiara-belona, indrindra ny fianakavian’ity ramatoa iray maty, ny sabotsy 28 oktobra teo ny fihetsik’ity rangahy rain-janany ity. Tsy neken’ity farany handrasana tao amin’ny tranon’izy mivady mantsy ny nofo mangatsiakan’ilay renin-janany.
Araka ny tantara dia efa malaza tamin’ny fanaovana tsinontsinona anio ramatoa io fony fahavelony ity rangahy iray ity. Nifampiteraka 3 mianadahy izy ireo ary 18 taona ny zokiny indrindra amin’izany raha toa ka 8 taona kosa ny farany. Niangavy sy niezaka nandresy lahatra an’ilay rangahy hatrany na ny zanany na ny fianakaviana mba hanaovana ilay razana tao amin’ny tranobe saingy nihizingizina teny ihany ilay rangahy.
Marihina fa miaramila efa misotro ronono izy io, ka ireo solontenan’ny miaramila tonga nitsapa alahelo teny an-toerana ny alahady folakandro no niezaka nifampiresaka tamin’ilay rangahy vao nanaiky ny hiandrasana an’ilay razana tao amin’ilay tranobe izy. Tsy nanaiky intsony anefa ireto fianakaviana izay efa sasatry ny nitalaho tamin’ilay rangahy nandritra ny ora maromaro raha vantany vao nahita ny razana nitsotra teo ambony lamaka tao anatin’ilay trano tolakila nisy ilay nofo mangatsiaka fa nionona tamin’ny sitrapon-drangahy.
Niandrasana nandritra ny roa andro ilay razana ary saika izay resaka izay ihany no heno teo am-bavan’ireo mpiara-monina. Tao ny nalahelo, tao ny tezitra ary nisy mihitsy aza ny nanome tsiny sy nanozona ilay raim-pianakaviana.